Ma Isbadal Siyaasadeed Baa ku Soo Fool Leh Deegaanka Soomaalida Itoobiya? – Rasaasa News
BBC- Somali, – Toddobaadyadii u dambeeyay Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa ka dhacay arrimo naadir ah.
Arrimahaas ayaa dabo socday isbadal siyaasadeed oo wayn oo dhawaan ka dhacay dalka Itoobiya ka dib markii uu xilka iska casilay ra’iisulwasaarihii hore Hailemariam Desalegn isaga oo arrintaas ku macneeyay in uu waddada u xaarayo in isbaddallo dhab ah ay ka dhacaan dalka Itoobiya, isla markaasna la dhagaysto dalabka shacabka.
Waxaa laga yabaa in haddii arrimahaasi ay sii xoogeystaan ay cadaadis ku keenaan madaxweynaha iyo maamulkiisa. Balse inuu dhaco isbadel siyaasadeed oo la taban karo in labo arrimood midkood la arkaa ama labadaba:
Midda labaad: Dawladda dhexe ee faderaalka ah oo si cad u sheegta in aysan ku qanacsanayn hogaanka Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya soona bandhigta cadaymo.
Labadaas arrimood midkoodna hadda ma muuqdaan oo xisbiga sidaas daraadeedna waxay u muuqataa in xilka sii hayn doonto xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo looga bartay in uu la jaan qaado isbadalladii dhawaa ee Itoobiya ka dhacay.